Kunamata Points Yekukomborerwa Kwemazuva Ose | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Yekukomborerwa Kwamazuva Ose
Kunamata Points Yekukomborerwa Kwamazuva Ose
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato mapoinzi ekuropafadzwa zuva nezuva. Zuva roga roga idzva rakazara nemaropafadzo, uye Mwari ane nyasha dzakakwana dzekubvisa maropafadzo aya kuvanhu vake. Chero ani zvake Mwari akafanoropafadza; hapana munhu pasi kana pasi angatuke munhu akadaro. Nyaya yaJosefa inowedzera kuratidza chokwadi ichi. Mubhuku ra Genesisi 50:20, "Kana uriwe, waifunga zvakaipa pamusoro pangu, asi Mwari akafunga zvakanaka, kuti zviitwe kuti vanhu vazhinji vachengetwe vari vapenyu, sezvavari nhasi." Vanhu vanogona kunge vachironga kukuvadza pasi pekunyepedzera kuti vanoda kukubatsira, asi Mwari anokwanisa kushandura marongero avo akaipa kuve kuratidzwa kwemakomborero kwauri.
Munamato wezuva nezuva chikomborero inobatsira kuvhura chikomborero chezuva rega rega nyowani. Sezvatakatsanangura nekufamba kwenguva kuti zuva rega rega rakazadzwa nehuipi, zvakare, zuva rega rega rakazadzwa nemaropafadzo akasiyana siyana. Isu tinofanirwa kumira panzvimbo chaiyo yekuvhura iwo maropafadzo ekushandisa kwedu. Ndinoraira maropafadzo ese awakatemerwa naMwari muzuva rino haazokunzvenga muzita raJesu. Kana tichitaura nezvekuropafadzwa kwemazuva ese, kuti iratidzike, unofanirwa kunge uri panzvimbo chaipo panguva chaiyo. Josefa aive panzvimbo chaiyo panguva chaiyo; ndosaka akazova mutungamiriri wehurumende kune imwe nyika.
David akazvizivisa kuvanhu vese veIsreal pazuva, uye ivo havana kukwanisa kukanganwa nezvake. Izvi zvakaitika nekuti aive panzvimbo chaiyo panguva chaiyo. Dambudziko ratinosangana naro nderekusave panzvimbo chaipo panguva yakakodzera. Ndinoraira netsitsi dzaIshe, pese paunofanirwa kuve kuti uwane kukomborerwa kwanhasi, dai mweya waIshe ukutungamire ipapo izvozvi muzita raJesu. Ndinoraira kubva nhasi, iwe uchagara uripo paunodiwa muzita raJesu.
Tichave tichipa mapoinzi ekunamata kuti tivhure maropafadzo ezuva rega rega idzva.
Baba vane nyasha, ndinokukudzai nechipo chehupenyu chamakandipa kuti ndione zuva idzva. Ini kupfuura iwe nekuda kwenyasha dzinonditi ndakakodzera kuve pakati pevapenyu vanozoona zuva rino rakanaka rawakaita, ngarikudzwe zita rako muzita raJesu.
Ishe, nekuti rugwaro runoti Ani naani anofunga neshoko achawana zvakanaka, uye akaropafadzwa uyo anovimba naIshe. Ndinovimba nemi, ndinotenda mushoko renyu. Ndinokumbira kuti musunungure maropafadzo ezuva rino kwandiri muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti nditungamire nzira yangu. Nenyasha rega mwenje wechiedza chako utungamire nzira yehupenyu hwangu nhasi. Ndipeiwo nyasha yekuve munzvimbo chaiyo panguva yakakodzera. Ndinozvisanganisa nevarume nevakadzi vezvinhu zvamakandirongera, ndinonamata kuti mutibatanidze nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, maropafadzo amakandigadzirira muzuva rino idzva haazotiza muzita raJesu. Ini ndichave ndiripo kuti nditore maropafadzo amakandichengetera nhasi muzita raJesu.
Chinyorwa chinoti mubhuku raDheuteronomio 28: 3-6 Ucharopafadzwa iwe uri muguta, uye ucharopafadzwa mumunda. Zvibereko zvomuviri wako, nezvibereko zvevhu rako, nezvibereko zvemombe dzako, nezvibereko zvemombe dzako, namakwayana amakwai ako, zvicharopafadzwa. Dengu rako, nomudziyo wako wokukanyira, ucharopafadzwa. Ucharopafadzwa iwe paunopinda, uye ucharopafadzwa kana uchibuda. Ishe, ndinoita kuti ropafadzo rive mubhuku iri raIshe pamusoro pehupenyu hwangu nhasi. Ndinoraira kuti nzira yangu yakaropafadzwa, munda wangu wakaropafadzwa muzita raJesu.
Izvo zvakanyorwa kuti Ishe vacharaira kuropafadzwa pauri mumatura ako uye mune zvese zvaunotora. Uye achakuropafadza munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako. Ini ndinofara mukuratidzwa kweshoko iri pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Ndicharopafadzwa munyika, sekubuda kwandinoita nhasi, vanhu vachandifarira muzita raJesu.
Nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Ishe vachakusimbisa iwe, kuti uve rudzi rutsvene kwaari, sezvaakakupikira; kana ukachengeta mirairo yaIshe Mwari wako, nekufamba munzira dzake. All all of of earth that that that that that that you you,,,, all all all all all all all all all all all all all all。 Ipapo marudzi ose enyika achaona kuti munodamwa nezita raJehovha, uye ivo vachakutyai. Uye Jehovha uchakuwanzira kubudirira, nezvibereko zvechizvaro chako, nezvibereko zvezvipfuwo zvako, nezvibereko zvevhu rako, panyika yakapikirwa madzibaba ako naJehovha, kuti uchakupa iyo. Ishe vachakuzarurira dura rake rakanaka, iro matenga, kuti ipe mvura panyika yako mumwaka wayo uye nekuropafadza mabasa ese emaoko ako. Iwe uchapa zvikwereti kumarudzi mazhinji, asi iwe haungakweretesi. Ndinoraira nesimba rematenga, maoko angu achasimudzirwa kumusoro kwedenga. Ndichava munhu wekuropafadza kumarudzi, muzita raJesu.
Baba Tenzi, sezvo ini ndichange ndichibuda nhasi, ndinonamata kuti mutungamire nzira yangu uye mubatanidze nevanoenda kunobatsira. Murume kana mukadzi wamakandigadzirira, ndinonamata kuti munongedze nzira yavo kwandiri muzita raJesu.
Ndinonamatira nyasha dzinozondiita mwedzi pakati penyeredzi, nyasha dzinozokwezva kukomborerwa nekufarirwa kubva kumativi akasiyana epasi, ndinonamata kuti musunungure kwandiri nhasi muzita raJesu.
Rugwaro runoti Chipo chose chakanaka uye chakakwana chinobva kumusoro, chichiburuka kubva kuna Baba vezviedza, uyo asina mutsauko kana mumvuri nekuda kwekuchinja. Ishe ndinonamata kuti musunungure chipo chakakodzera kwandiri nhasi netsitsi dzenyu. Muzita raJesu. Ameni.
Previous nyayaKunamata Points YeMangwanani Kudzivirirwa Uye Kufukidza
inoteveraNzira Shanu Dzokunamata Mune Hondo Yemweya
Dorinda Gunyana 5, 2021 At 1:28 am
Mhoro Mufundisi urikuita sei? Pane dambudziko nemwanasikana wangu anga aine mweya wekuba uye haagone kumira. Anga achiba panguva yemakore matanhatu ekuberekwa. Akati anoda rubatsiro
Anoda kununurwa. Anenge ave nemakore gumi nemasere ekuberekwa. Ndibatsireiwo padambudziko iri. Ndatenda
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Nyamavhuvhu 6, 2021 At 3:03 pm
Mudiwa batana neni paWhatsApp, uchishandisa nhamba iri pawebhusaiti yedu
María José plazas Nyamavhuvhu 8, 2021 At 12:05 pm
Kunamata Pfungwa Kukunda Makaro
Kunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa
20 Zvipikirwa zvaMwari Kunamata Paunenge Uchida Ushingi uye ...
Kunamata kunongedzera kumiseve yekurwara